Cimilada sii kululaaneysa waxay kor u qaadi doontaa 6% isticmaalka qaboojiyaha | Saadaasha Shabakadda
Kordhinta celceliska heerkulka ayaa dhammaanteen nagu qasbi doona inaan aad u isticmaalno qaboojiyaha wax badan, taas oo marka laga reebo inay saameyn ku yeelato biilka korantada, sidoo kale waxay sii xumeyn kartaa kuleylka adduunka haddii aan la qaadin tallaabooyin looga hortagayo.
Waana in kororka dalabku ku qasbi doono shabakadaha korontada, kuwaas oo durba xadka ku jira. Meel xagaagu aad u kululaanayo, sida ka dhacda Spain, isticmaalka ayaa kordhin kara ilaa 6% dhamaadka qarniga.
Waqtigan xaadirka ah, oo u dhiganta afar kun oo megawatt oo tamarta nukliyeerka ah ayaa loo baahan yahay si loogu adeego 1000 saacadood oo ugu sarreysa sanadkiiba, sida ku cad xisaabinta Shabakadda Korontada Isbaanishka. Inta lagu jiro waqtigaas, waxaa lagama maarmaan ah in la kiciyo dhirta wax soo saarka ugu qaalisan, oo waliba ah kuwa soo saara kaarboon laba ogsaydhka (CO2).
Sida laga soo xigtay daraasad lagu daabacay Majaladda PNAS, baahida loo qabo kuleylka waa la dhimi doonaa; taas beddelkeedna tan la xiriirta qaboojiyaha ayaa sii kordheysa. Marka la eego, xoghayihii hore ee arrimaha isbadalka cimilada ahna agaasimaha machadka hormarinta waara iyo xiriirka caalamiga, Teresa Ribera, waxay tiri "tani waxay qasbi doontaa isbadal ku yimaada jiilka iyo qaabka isticmaalka, iyadoo la hubinayo 100% koronto la cusboonaysiin karo sanadka 2050, iyadoo la adeegsanayo nidaam kordhinaya keydinta iyo waxtarka isla markaana u janjeeraya in isticmaalka kale ee tamarta ugu dambeysa ay ku qanacsan yihiin korantadan dib loo cusboonaysiin karo, taasoo isbeddel ku samaynaysa dhaqdhaqaaqa ».
Intee in le'eg ayuu heer kulka ku sii kordhin karaa Spain? In ka badan intii la rabay. Xaaladda ugu xun ee rajo xumida Qaramada Midoobay waxay saadaalinaysaa inay sare u kici doonto ilaa lix digrii xagaaga gobolka Mediterraneaniyo illaa 3,8ºC xilliga jiilaalka. Waddanku wuxuu lahaan karaa jawi lamid ah kan Marooko xilligan haysato, sidaan kusoo sheegnay maqaalkan.
Sida iska cad, si aan ula qabsano kuleylka, waxa aan sameyn doono ayaa ah inaan sameyno wax walba oo suurtagal ah si aan qabow u ahaano. Laakiin haddii aan la ixtiraamin heshiiska Paris, waxaa laga yaabaa inaan wajahno xaalad gebi ahaanba aan la aqoon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Kuleylka adduunka ayaa kor u qaadi doona isticmaalka 6% qaboojiyaha